Dowladda Mareykanka oo faahfaahisay sababta ay u joojisay duqeyntii ay ka fulin jirtay Soomaaliya? | Banaadir Times
HomeUncategorisedDowladda Mareykanka oo faahfaahisay sababta ay u joojisay duqeyntii ay ka fulin...
Dowladda Mareykanka oo faahfaahisay sababta ay u joojisay duqeyntii ay ka fulin jirtay Soomaaliya?
Madaxweyne Joe Biden ayaa joojiyay duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ka dhaca meelaha ka baxsan goobaha dagaalka ee ay ka howlgalaan ciidamada Mareykanka, isagoo dib u badalay siyaasadii madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Donald Trump, kaasi oo militariga si xor ah u siiyay dalal ay ka mid tahay Soomaaliya.
“Duqeyn kasta oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo qorsheeyo kooxaha jihaad doonka ah ee ka baxsan Afghanistan, Syria ama Iraq waa in laga ogolaado Aqalka Cad”ayuu yiri afhayeenka Pentagon-ka John Kirby.
Wuxuu ku tilmaamay tallaabada “hagitaan ku-meel-gaar ah” oo la soo saaray “si loo hubiyo in madaxweynaha uu aragti buuxda ka haysto waxqabadyada muhiimka ah ee la soo jeediyay.”
“Looma jeedin inay joogto ahaato macnaheedu maahan joojinta” shaqo joojinta, ayuu ku sheegay shirkiisa jaraa’id.
“Waxaan si cad diirada u saareynaa halista joogtada ah ee ururada xagjirka ah ee rabshadaha wata. Waxaana si cad wali u go’an inaan la shaqeyno saaxiibada caalamka si aan uga hortagno khatarahaas,” ayuu yiri.
The New York Times ayaa sheegtay in tilmaamaha cusub si qarsoodi ah loogu gudbiyay taliyayaasha militariga kadib markii Biden uu yimid xafiiska 20-kii Janaayo, laakiin kaliya la shaaciyay maalmihii la soo dhaafay.
Laga soo bilaabo maalmihiisii ​​ugu horreeyay ee Aqalka Cad ee 2016, Trump wuxuu dib u rogay kontarooladii uu dhigay madaxweynihii ka horreeyay ee Barack Obama ee ku saabsan hawlgallada hubaysan ee ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee xagjirka ah, isaga oo sheegay inuu ku kalsoon yahay taliyayaasha dhulka jooga.
Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si deg deg ah ayey ku bateen intaas ka dib, iyagoo noqday qaabka kaliya ee howlgalada ee wadamada qaar oo kaliya xoogaa xoogag gaar ah oo Mareykan ah la geeyay oo taageeraya dowladaha hoose, sida Soomaaliya, oo Mareykanku uu kula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab ee Islaamiyiinta ah. ama Liibiya, halkaasoo ay ku bartilmaameedsadeen dowladda Islaamiga ah (IS).
In kasta oo milatarigu sheegayo in duqeyntoodu ay tahay Qatar NGO-yada ayaa sheegay in weerarradu inta badan ay sababaan khasaarooyin rayid ah, taasoo wiiqaysa waxtarkooda la-dagaallanka xag-jirnimada.
Ku simaha kormeeraha guud ee Pentagon-ka, Glenn Fine, ayaa warbixintiisii ​​ugu horreysay ee shacbiga ee howlgalka millatari ee Mareykanka ee Soomaaliya la daabacay bishii Febraayo, wuxuu dib u xasuusiyay in qeyb ka mid ah howlgalka Africom uu yahay in la xaqiijiyo in sannadka 2021, Shebaab, dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya iyo kooxaha kale ee argagixisada ah. si ku filan “loo nusqaamiyay oo aysan waxyeello weyn u geysan karin danaha Mareykanka.”
Previous articleCiidamada ammaanka & rag hubeysan oo ku dagaalamay Muqdisho + khasaaraha
Next articleCiidanka xoogga oo sheegay in ay burburiyeen Maxkamad ay leeyihiin Shabaab